Inona ny orinasam-pandraharahana napetraka ao amin'ny orinasa?
Inona avy ireo orinasa misy orinasa?
Inona ny taonan'ny orinasan-tseranana mahasoa ahy? Inona no atao hoe orinasan-tseranana?
Ny orinasan-tserasera fanampiny no mahazo tombony?
Inona no atao hoe orinasa Shell na Corporate
Fanapahan-kevitra fanampiny sy tranonkala
Ampidiro ny fampahalalana
Hampiditra ny FAQ
Ny orinasan-tserasera dia orinasa iray na orinasa izay noforonina teo aloha
daty. Amin'ny ankapobeny dia tsy hitondra asa izany. Tsy mitazona izany
ny vola, tsy mbola nisy ny andraikitra ary mbola tsy mamoaka vola. Ireo
Ny orinasa dia antsoina koa hoe orinasa mpamokatra orinasa. Rahoviana
Mividy orinasa orinasa iray orkorosorin'ny orinasa efa-taona ianao, izany dia
Ho tonga amin'ny fanananao miaraka amin'ny lahatsoratra misy rakitra voaforonao ianao
avy amin'ny governemanta miaraka amin'ny daty nahaterahany ary koa:
"Akon'ny Sole Incorporator" izay mandefa ny orinasa
Minitra fivoriana (endrika fanasan-doha)
Kitapo orinasa (bokin-tsoratra)
Fepetra mariam-pandraharahana (birao, tsy navoaka ampahany)
Tombo-kase ho an'ny orinasa
Bylaws amin'ny orinasa (paikady tsy voasoritra)
Lisitry ny orinasa iray mamela anao hahafantatra ireo singa hitazonana ny orinasa
amin'ny toerana tsara
CD miaraka amin'ny endrika manan-danja
Lohahevitra manan-danja hafa
Miverina any amin'ny Shelf Corporation
Inona avy ireo karazana fikambanana efa antitra?
Ny orinasan-tseraseran'ny orinasa sy ny orinasa dia afaka manondro karazana antokom-pitsarana. izany
Anisan'izany ny orinasam-panjakana amerikanina sy ny orinasa amerikanina, ary koa ny offshore sy
fikambanana iraisam-pirenena. Ny teny hoe "marika" na "antitra" dia manondro fotsiny ny
Ny zava-misy dia efa napetraka ny orinasa ary mipetraka "amin'ny
shelf "miandry hividy.
Miverina any amin'ny orinasa Shelf
Inona ny taonan'ny orinasan-tseranana mahasoa ahy?
Zava-dehibe ny mifidy ny taona mifanaraka amin'izay ilainao. Hoan'ny
mpanorina trano na orinasa mpanentana ny isan'ny taona
Ny fisiana dia manan-danja amin'ny mpanjifa. Raha tao amin'ny orinasa fanorenana nandritra ny taona 15 ianao, ohatra, ny fahazoana ny orinasa 15 taona dia mety hahatsapa fa mifanaraka amin'ny fotoanao amin'ny raharaham-barotra. Mba hahazoana fifanarahana sasany dia roa taona ny fepetra takian'ny orinasa. Mety tsy izany no hany tokana ahafahana mahazo fifanekena, fa mety ho iray amin'ireo fanamarinana maro-ny-boaty, indrindra, araka ny filazantsika, rehefa mifanitsy ny vanim-potoana misy eo amin'ny sehatry ny orinasa sy ny orinasa. Ankoatra izany, misy milaza fa ho an'ny
Business izay te-hanangana orinasa, ny zokiny kokoa ny tsara indrindra. Mety na maro no tsy tranga, saingy misy antony hafa izay mety manana lanjany bebe kokoa toy ny tombombarotra amin'ny fandraharahana sy ny fahamendrehana. Famaritana manontolo. Ny olana fototra dia ny fahitana ny mety ho mpanjifa sy
mpampindram-bola mety. Firy taona no ilana ny raharaham-barotra?
na ny mpanjifany na ny banky fa ny orinasa dia azo antoka sy azo antoka? Ny taonany
ny raharaham-barotrao? Matetika izy no mpanjifa na mpampindram-bola. Tsy milaza izahay fa ny taona ihany no hany tokana eto, saingy mety hametraka lanjan-kely kely eo an-jaridainanao izany, ankoatra ireo antony hafa manan-danja hafa.
Inona no dikan'ny hoe orinasan-tserasera?
Ny taonan'ny orinasan-tsoratra dia mitovy amin'ny taona maha-olona
maha. Ny lalàna dia miantso ny orinasa olona iray. Kanto io
olona. Tsy mitovy amin'ny olona manana azy izany. Ny tompon'ireo
Ny fikambanana ara-dalàna, toy ny any amin'ny fikambanana ara-dalàna ihany, dia mitovy
ny tsirairay dia samy misaraka roa. Ny orinasa HJ Heinz
nanomboka tamin'ny 1869. Ny tompony tany am-piandohana, ny manamboninahitra ary ny tale dia efa ela
satria lasa. Na izany aza, ny vanim-potoanan'ny orinasa dia mitoetra marina
Ny tombontsoa azo avy amin'ny Shelf Corporation
Vatsy malalaka - Ny orinasa natsangana dia vonona ny halefa
ho an'ny famindrana avy hatrany fa tsy mila miandry ny governemanta
Fahamendrehana ho an'ny mpanjifa (Ity no tsara indrindra, araka ny hevitrao, raha ny vanim-potoana misy anao eo amin'ny orinasa dia mifanaraka amin'ny taonan'ny orinasa.)
Azo atao ny manatsara ny fahaiza-manaon'ny fifanarahana. Betsaka ny fifanarahana tapakila dia mitaky fa ny orinasa dia eo anelanelan'ny roa sy dimy
taona. Izany no tsara indrindra rehefa mandeha araka ny vanim-potoana misy eo amin'ny orinasa ianao.
Fidirana haingana kokoa amin'ny fahazoan-dàlana (satria miditra haingana ny orinasa)
Mora kokoa ny mahazo ny renivohitra kapitalisma (satria miditra haingana ny orinasa)
Mora kokoa ny maka orinasa "public" ary mivarotra ny mombamomba ny tahiry
raha toa ka misy ny fepetra sasantsasany, toy ny fepetra voalazan'ny fanjakana sy federasiona federaly.
Mora kokoa ny fotoana hampidirana ny orinasa
Azonao atao ny mampitombo ny fahafahanao manolotra na manolotra ny orinasa eo amin'ny kianja misy ny kandidà
Ny orinasa dia mila mandresy ny fisian'ny dipoavatra maharitra
Fifanarahana mifandraika (fampahafantarana feno)
Avy hatrany dia nahazo orinasa nitaky faharetana
Fomba ahafahana miditra amin'ny fandraharahana bebe kokoa
Ireo tombony voalaza ireo dia mifototra amin'ny hevitrao ary tsy mety amin'ny toe-javatra misy anao. Ny mpividy amin'ny orinasa mpanamboatra tetikasa dia manana tombony lehibe ho an'ny vao haingana
fitaterana. Voalohany, ireo tombony voalaza etsy ambony. Avy eo, ny
tombony amin'ny fahafahana mividy orinasa iray efa misy ary mbola
manamboninahitra, mpitantana sy mpizara, manome azy ireo
fanaraha-maso avy hatrany ny orinasa. Manoro ny fampahafantarana feno izahay amin'ny fampahafantarana ireo mpampindram-bola sy antoko hafa izay vao nahazoana antoko efa antitra.
Inona ny orinasam-pambolena na orinasa orinasa?
Vondron'orinasa vondron'orinasa no "orinasan-tsambo," araka ny fantatra, izany
dia orinasa efa niorina ihany koa. Ireo karazana
Matetika ny orinasa dia tsy manana tomponandraikitra, mpiandraikitra na mpitantana
(raha tsy hoe voatery halefa hitazona ny tsara). Amin'ny ankapobeny
tsy manana fananana na fidiram-bola. Ny singa toy izany dia mifanandrify amin'ny vaovao
trano izay natsangana ary vonona ho anao hibodo.
Fampahalalana momba ny orinasa rakitra